ललिता निवास जग्गा प्रकरण : उम्कन खोज्दैछन् लालपुर्जामा फोटो टाँस्‍नेहरू | Manang Online
काठमाडौँ — मालपोत विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यले २०४९ सालमा आफ्ना ज्वाइँ वैकुण्ठ शर्मा रेग्मीलाई कार्यकक्षमा बोलाए । कार्यालयमा प्रवेश गरेर बसेपछि आचार्यले ज्वाइँतिर केही कागजात तेर्स्याए र एउटा ठाउँमा बूढीऔंठाले देखाई सही गर्न भने । के कागज हो ? कस्तो हो ? ससुराले किन सही गर्न भनेका हुन् ? ज्वाइँ वैकुण्ठ अलमलमा परे । ‘आफ्नै ससुराको विश्वास छैन र ?’ महानिर्देशक जंगिए । ससुराले भनेको ठाउँमा सही गरेर वैकुण्ठ फर्किए ।
मैले ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा किनेको छैन । ससुराले बोलाएर जंगिएपछि सही गरेर फर्किएको हुँ । २०/२५ वर्षपछि आज जग्गाको खास कुरा र कारोबार थाहा पाएँ,’ दिवंगत भइसकेका आफ्ना ससुराविरुद्ध अख्तियारमा बयान दिन बाध्य भएका वैकुण्ठले भनेका छन्, ‘मलाई दस्तखत गराउने र पदको दुरुपयोग गर्ने काम उहाँको हो । यस सम्बन्धमा मलाई केही जानकारी छैन ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ससुरा र ज्वाइँ दुवैलाई मुद्दा चलाएको छ ।
तिनै गौतमले आफ्ना साढुदाइको छोरा (भतिज) मोहनप्रसाद भट्टराईका नाममा जग्गा लुकाएको खुल्यो । बयानमा भने मोहनले कुरा चपाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामीले संयुक्त रूपमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट बकस पास गरी लिएका थियौं । राणा परिवारसँग मेरो कुनै चिनजान छैन ।’ त्यति हुँदाहुँदै पनि उनले ‘जग्गाको मूल्य लिएर मात्रै पास गरिदिएको’ भन्न छाडेका छैनन् । निर्वाचन आयुक्तबाट समेत अवकाश पाइसकेका सुधीरकुमार शाहको राणा परिवारसँग घुमाउरो नाता पर्छ । भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा कार्यरत रहेका बेला उनले डिल्लीबजारमा भएका सबै चलखेल बुझेका थिए । जग्गाका बिचौलियालाई पनि राणा परिवार भेटाइदिने सम्पर्कसूत्र चाहिएको थियो । सुधीर आफ्ना मित्र गेहनाथ भण्डारीका साथ खेलमा सक्रिय भइहाले तर पर्दा पछाडि काम गरेका उनीहरू असम्बन्धित कार्यालयको निर्णयमा कागजी रूपमा जोडिने अवस्था नै भएन । जग्गा पास गर्ने बेला दुवैले श्रीमती अघि सारे । सुधीरकी श्रीमती उर्मिलाको बयानअनुसार जग्गा दलाल रामनाथ घिमिरेले जग्गाधनी भेटाइदिएका हुन् । उर्मिला र गेहनाथकी श्रीमती भुवनकुमारीको बयान मिल्दोजुल्दो छ ।
छानबिनका क्रममा राणा परिवारका तर्फबाट काका–भतिज रुक्मशमशेर र हाटकशमशेरले अख्तियारमा बयान दिएका थिए । ‘तपाईंको जग्गा फिर्ता आउँछ भनी विभिन्न व्यक्ति आएर प्रक्रियामा सघाएको’ रुक्मको बयान छ । गेहनाथ, सुधीर र राणा परिवारको बयानमा एकरूपता देखिन्छ । स्रोतका अनुसार अख्तियारले छानबिन अघि बढाएपछि उनीहरूले सबै प्रपञ्च मिलाएका थिए । हाटकशमशेरले आफ्नी आमा शैलजा राणाले केही व्यक्तिलाई जग्गा बकस दिएको र त्यसको सिफारिस रामनाथ नामका व्यक्तिले गरेको बताएका छन् तर उनले बकस दिँदा पनि ‘मुवा (आमा) ले बिक्री गर्नुभएको हो’ भन्न छाडेका छैनन् । राणा परिवारका नाममा फिर्ता आएको आधाजसो जग्गा ५० भन्दा बढी मोहीले आफ्नो नाममा बनाएका थिए । रुक्मशमशेरहरूले जग्गा फिर्ता पाउँदा मोहीका किसानहरूको लगत मालपोतमा थियो । सुवर्णशमशेरका सन्तानहरूले नै जग्गा फिर्ता पाएपछि त्यसमा जोडिएका मोहीहरूलाई वञ्चित गर्नुहुँदैन भनेर तत्कालीन एमालेका केही नेताहरू दौडधुपमा थिए । मोही दाबी गर्नेहरूले ‘राणाहरूको भाग हामीलाई पनि चाहिन्छ’ भन्दै विभिन्न ठाउँमा दौडधुप गरेका थिए । जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ३३० नम्बरको लेखनदासको प्रमाणपत्रवाहक रामकुमार सुवेदी डिल्लीबजार मालपोतको पीपलको चौतारामा बसेर घुँडामा नेपाली कागज राखी लेखापढी गर्थे ।